The Boy and his Faith
ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်ရေးကိုယုံကြည်တန်ဖိုးထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုရှိပါတယ်
ဘုရားချီး ရှာပုံတော် ဖွင့် “၁၉၈၂ ခု နိုင် ငံ သား ဖြစ် မှု” ဥပဒေကြီး ပြင် လိုက် စမ်း ပါ
Posted: 30 Sep 2012 10:01 AM PDT
Posted: 30 Sep 2012 08:01 AM PDT
Here'savery short story written by Paul Coelho that hasasimple but powerful lesson for us.
'Are you crazy?' he asked the boy.
'It hasn't rained in this region for five years and the heat from hiking up the mountain will kill you.'
The boy replied: 'I haveacold, priest. If we are going to ask God for rain, can you imagine our return from the mountain? It will beaspate and I need to be prepared.'
At this moment, they heardagreat roar coming from the sky and the first drops began to fall.
It sufficed the faith ofaboy inamiracle that even the most prepared ones didn't believe in.
Posted: 30 Sep 2012 06:35 AM PDT
My brother Haji U Maungmaung Skw wrote on his FB wall>>>
မခံချင်စိတ်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆဲဆိုနေတဲ့သူတွေကို
အစ္စလာမ်ဘာသာကို တိုက်ခိုက်စော်ကား ဆဲဆိုနေသူတွေဟာ လူနဲစုလေးပါ။
ဒီလိုလူနဲစုကလေးက ပြသနာကိုဖန်တည်းလိုလို့ ဘာသာရေးစော်ကားတဲ့ စကားတွေစာတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖြန့်ဝေနေတဲ့အထဲမှာ သံဃာအချို့
သို့သော်-သူတို့ရိုင်းတိုင်း သူတို့လိုရိုင်းပြီးတော့ ဗုဒ္ဓာဘာသာနဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေကို စော်ကားမော်ကား ရေးလိုက်ကြတော့ ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိမှာလည်း။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဘာသာတရားအားလုံးကို လေးစားတဲ့- ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်ရေးကိုယုံကြည်တဲ့ တန်ဖိုးထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းသံဃာတွေ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုနဲ့
ဒီအထဲမှာ ဦးဇင်းဂျောင်းဂျောင်းဟာ စံပြပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Ashin Issariya's photo. wrote>>>
TQ Phone Phones. One Good Monk pray together for the dead Muslim and another Good Monk prays on his FB…Heart felt thanks… and after all there isabright future for our beloved Myanmar. My heart is beating fast and my tears flow with happiness.
Posted: 30 Sep 2012 06:17 AM PDT
"Sekarang kita ada dua orang pemimpin BN Sabah sertai kita, Insyaallah minggu depan akan ada lagi yang akan jadi agen kita," kata Azmin.
"Memang ada perbincangan dijalankan dengan pemimpin BN di Sabah dan Sarawak tentang bagaimana mereka boleh mainkan peranan untuk membawa perubahan untuk rakyat Sabah dan Sarawak.
"Ini soal startegi, jadi tak semestinya kita umumkan semuanya serentak, kita tunggu masa yang sesuai, tetapi seperti saya nyatakan tadi, akan ada lagi pimpinan kanan, penting tempatan yang akan sertai kita," kata Azmin sebaik selesai rapat tersebut.
"Isu ini menjadi kemarahan PM Datuk Seri Najib, sebab itulah dalam belanjawan baru-baru ini tiada peruntukan yang benar-benar menggembirakan rakyat Sabah kecuali menyentuhnya secara pinggiran sahaja," ujar Azmin lagi.
Posted: 30 Sep 2012 02:51 AM PDT
To Pakatan Rakyat, no need to criticise BN's 2013 Budget. In fact, there is no room at all to do so. Just pay attention to your own 'Bajet Pakatan Rakyat' which promises the rakyat 'moon, sun and stars'.
Budget 2013 is for everybody, including Anwar, Kit Siang, Karpal, Nik Aziz and their supporters. It's notatitbits budget as claimed by the Opposition Leader as what comes under theirs is merelya'dream package'.
Information, Communications and Culture Minister Rais Yatim said the opposition will find no room to 'attack' Budget 2013 is it covers the whole strata of the society.
The rakyat should look well into the dynamism of the Budget as it takes into consideration their utmost need, like housing, education, utilities and employment.
And there is no way for the economy to go burst as the government is not only capable of maintaining its stability but also in debt repayment, said Second Finance Minister Ahmad Husni Hanadzlah.
Our debt is not more than 55 per cent of the Gross Domestic Product (GDP), which is most manageable as compared to some developed and developing countries.
So, Pakatan should shut up and concentrate on their objective to bring down the government by dodging the rakyat.
What PM Najib tabled at the Dewan Rakyat on Friday was to take care of the well-being of society at large, which among others includes special allocations to the fishermen, farmers, police, armed forces personnel and pensioners.
Pakatan's Budget also tried to gain the police support witha'considerable' pay hike but stop short of mentioning the armed forces and others. Of course they need the police to side them... who knows more Bersih would be organised after this!
A crab was once running on the sea shore, and was admiring it's beautiful footprints…
Just thenahuge wave splashed and washed away the footprints.
The crab said to the wave, "I considered you as one of my best friends, then what made you do this?"
The wave replied, "A fisherman was following your footprints; that is why I cleared them off."
Things are not always the way the seem on face value…
Relationships bring caring beyond the others imagination!
Posted: 30 Sep 2012 04:07 AM PDT
My FB Friend Mr.Khalid Walid
ဘုရားချီး ရှာပုံတော် ဖွင့် ဥပဒေကြီး ပြင် လိုက် စမ်း ပါ။
ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ နှင့် ၂၉-၉-၁၂ ည ၇ နာ ၇ီ RFA မေး မြန်း ခန်း သို့ ရည် ညွှန်း
၁. ၁၉၈၂ ခု နိုင် ငံ သား ဖြစ် မှု ဥ ပ ဒေ အား ပြု ပြင် ရန် မ လို ဟု မိ မိ ကိုယ် ပိုင် အ မြင် အ ရ ထင် မြင် ပါ သည် ဆို သော ဝန် ကြီး မင်း က အောက် ပါ အ ချက် များ ကြောင့် ဟု ပြော ပါ သည်။
က ) ယင်း ဥပဒေ သည် ၆ နှစ် ကြာ ရေး ဆွဲ ခဲ့ ခြင်း ကြောင့်….
ဒါ ဆို ထပ် ဖြေ ပေး ပါ ။ ။ ဥပေ
ဒ တစ် ရပ်၏ ပြည့်စုံ ကောင်း မွန် မှု သည် ရေးဆွဲ ချိန် ကြာ မြင့် မှု နှင့် သက် ဆိုင် ပါ သလါး
ခ ) ပညာရှင် များ စွာ ဖြင့် ရေး ဆွဲ ခဲ့ ခြင်း….
ဒါ ဆို ထပ်ဖြေ ပေး ပါ ။ ။ မည် သူတွေ ပါ ဝင် ရေး ဆွဲ ခဲ့ ပါ သနည်း ။ ထိုစဉ်ကယင်း ဥပဒေပြုစုသောအဖွဲ့ကို တိုင်းသိပြည်သိ မကြေငြာ ခဲ့ ပါ။
ဂ ) တိုင်း ပြည် ဒေ သ အ နှံ့ အ ပြား သို့ ချ ပြ ဆွေး နွေး ခဲ့ ခြင်း….
ဒါ ဆို ထပ်ဖြေ ပါ ။ ။ အား လုံးကောင်း ပါ သည် ဆို သော မဆလ ပါ တီ တွင်း ၌ သာချပြ ဖြစ် ခဲ့ ပါ သည် လား
ဃ ) ယနေ့ခေတ် စါးလါ နေ သော လူ့အခွင့်အရေး။ ခလေးအခွင့်အရေး များနှင့် ကိုက်ညီမှု ၇ှိ နေ ပါ သည် ။
ဒါ ဆို ထပ်ဖြေပါ ။ ။ သေချာ ပါ ရဲ့ လါး ။ ဒီ ဥပဒေ ကို UN တွင် ဝေဘန် ထါးသည် ကို မ သိ သည် လား ။ မသိဟန် ဆောင် တါ ပါ လါး။
င ) ဥပဒေ ပါ ( ၁၈၂၃ ) ခု မတိုင် ခင် အခြေ ချ နေ ထိုင် သော တိုင်းရင်းသါး…ဟု ဆို သူ များ သည်…ကယား ။ ကချင်၊ ကရင် ။ မွန် ။ မြန်မာ ၊ ရခိုင် ၊ ရှမ်း။ တို့နှင့် ယင်းတို့အနွယ် များ ဟု ဘူးလုံးနားမထွေး ရောနှော ၍ ရောမချ စေချင် ပါ…
လူ မျိူး စု…၁၄၄ မှ သည် ၁၃၅ မျိူး ။ မနေ့တစ်နေ့က ၁၀၁ မျိူး ။ ထို အ တိုး အ လျှော့များ ကို မည် သည့် အဖွဲ့ အ စည်း များက မည် သို့သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် သတ်မှတ် ပြောင်းလဲ နေ ပါ သ နည်း။ အချို့ သော လူမျိူးစုများ ဥပမာ ဒိုင်းနက်။ မာရမာကြီး။ ကိုးကန့်။ တို့ တိုင်းရင်းသား ဖြစ် လိုက် မဖြစ် လိုက် မည်သူတွေ သတ်မှတ် နေ ပါ သလဲ…၁၉၇၃ ခု သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်စဉ်က တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ် မှတ် ထားသော လူမျိူးစု များ ကို ဘယ် သူက ဘယ်သူ့ အမိန့်ဖြင့် ဖြုတ်ပစ် လိုကါ ပါ သည် လဲ…
၁၉၄၈ ခု မတိုင် မှီ မျိုး ဆက် ၂ ဆက် နေ ထိုင် ခဲ့ ကြောင်း ခိုင် လုံ သက် သေ ပြ နိုင် လျှင် နိုင်ငံသား ဖြစ် ခွင့် ရှိ သည် ….ဟု ဇွတ် ပြော ဆို နေ မှု နှင့် ပတ် သက် ၍…..
စ ) ဗျတ်ဝိ ၊ ဗျတ္တ မှ အ စ ပြု ကာ။ ပဋိတ်ခရား အစရှိသော နိုင်ငံခြားသားတို့ ပုဂံ ခေတ် မှာ ပင် ပြည် တွင်း နေ ဖြစ် ကြ သည်။ ဦးကုလား ရာဇဝင် တစ်ခု တည်းနှင့် ပင် ၁၈၂၃ မတိုင် ခင် ကတည်းက ပြည်တွင်း နေ နိုင်ငံခြားသား ( ခင်ဗျားတို့အခေါ် ကုလားများ ရှိ နေ ခဲ့ ကြောင်း သိ နိုင် ပါ သည် )။ အနီးဆုံး ဖြစ်သော ၊ မင်းတုန်မင်း၊သီပေါ မင်း တို့လက်ထက် ဘုရင့် စစ်တပ်မှ မင်းမှုထမ်း များ၏ အဆက် အနွယ် ။ အမရပူရ တောင်မြို့ မှ ဗုံးအိုး ရွာ သူ ၇ွာ သားများ ကို ဘာကြောင့် နိုင်ကဒ် အတွက် သွေးနှော သံသယ ဟု စွပ်စွဲ နေ ပါ လဲ။ မည် ကဲ့သို့ ခိုင်လုံ သက်သေ ပြရ ပါ မည် လဲ။
မြန်မာပြည် တွင်..မည်သည့်အချိန်ကာလ တွင် မှ ယင်း ကိစ္စ အလို့ငှာ စာရွက်စာတမ်းများ စတင် ခဲ့ ပါ သလဲ။
ကိုခင်ရီ နှင့်ကျုပ် ၆၀ တန်းတွေပါ။ ခင်ဗျား အဖိုးအဖွား တွေ ၄ ဦး စလုံးရဲ့ မှတ် ပုံတင် ပြ နိုင် ပါ သလား။ သူတို့တွေ မှာ မွေးစာရင်း ရှိ ပါ သလား။ ကုန်ကုန် ပြောမယ် ကိုခင်ရီ…ခင်ဗျား မှာ မွေး စာရင်း မ ရှိ ပါ ။ မ ရှိ နိုင် ပါ။
ခင်ဗျား ဌာန လုပ် ပုံက ။ မနေ့တနေ့က နိုင်ငံခြား က လါ တဲ့ဗမာစကားသိပ်မတတ် တဲ့ အဖိုးအဖွား ၂ ဦး ( ၄ ဦး ထဲ က ၂ ယောက် ပေါ့ ဗျာ ) UCC ခေါ် နိုင်ငံသားပြုခွင့် ( ၁၉၄၈..၄၉..၅၀….၆၂..၆၄..) လျှေက်ထား တဲ့ စာပြ နိုင် သူတွေ ကို ၁၉၈၂ ခု ဥပဒေ နဲ့ ညီ တယ် ဆိုပြီး ( ဘောင် ဝင် တယ် ပေါ့ဗျာ ) နိုင်ကဒ် သိပ် မခက် ဘဲ ရနိုင်တယ် ။ ထုတ်ပေး တယ် ။ အဲ…အဖိုးရဲ့ အဘိုး ၊ အဖွား ရဲ့ အ ဘွား လက်ထက်ကတည်း က ဒီ မှာ မွေး ။ ဒီ က လူ မျိုး ( ဆွေ မျိုး ရင်းတွေ မှာ လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင် တွေ ရှိ နေ ကြ တဲ့ ) လို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ် သတ် မှတ် တယ် ၊ ဘာ UCC မှ မ လျှောက် ထား ဘူး ၊ လျှောက် ဖို့ လဲ မ လို ဘူး လေ။ အဲ သူတို့သားသမီး တွေ ( ခင်ဗျား တို့ ကျွန်တော် တို့ မိဘ အ ရွယ် အသက် ၈၀ ကျော် အ ရွယ် တန်းတွေ ပေါ့ ) ရိုး ရိုး ၂ ခေါက် ချိုး ။ ၃ ခေါက် ချိုး မှတ် ပုံ တင် ဘဲ ရှိ ကြ တယ်။ တစ် ချို့ လဲ စော စော ( ၁၉၅၃၊ ၅၄ ။ ၅၉ စသဖြင့် သေသွားကြ တယ် ) သေလီု့ ၂ ခေါက် ။ ၃ ခေါက်ချိုး မှတ် ပုံ တင် တောင် မ ရှိ ဘူး…မွတ်စလင်လား…ဒါဆို သွေးနှော..သံသယ..သွား တော့ တိုင်းရုံး။ နေပြည် တော် ဘုတ် အဖွဲ့။ ဟိုစာရွက် ဒီ အထောက် အ ထား …အင်း..ဘုရားချီး ရှာ ခိုင်း နေ တယ်…ကောင်းလိုက် ပြညိ့စုံ လိုက် တဲ့…၁၉၈၂ ခု ဥပဒေ ကြီး ဗျာ ။
တပ်ထဲမှာ ခင်ဗျား အောက် မှာ လုပ်သွားတဲ့ အ ရာရှိ ရဲ့ ဇနီး က ကျုပ် ညီ မ အ ရင်း ခေါက် ခေါက် ပါ။ သူ့ နိုင် ကဒ် ဗမာ / ဗုဒ္ဓ ပါ။ ကျုပ် တို့ တစ် တွေ အ ရင်း တွေ ဖြစ်ပြီး ။ အိန္ဒိယ / ဗမာ ။ ပသီ /ဗမာ…စုံနေတာပါ ဘဲ။
၁၉၄၈ ခု မတိုင် ခင် က မျိုး ဆက် ၂ ဆက် ဒီ တိုင်းပြည် မှာ နေထိုင် ကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထား..??? ခင်ဗျား တို့ မွေးရာပါ တိုင်းရင်းသား တွေ ကော အဲ လို ဘာနဲ့ သက် သေပြ မလဲ။ မွေးရာပါ တိုင်းရင်းသား ဆို တာ နဲ့ပြီးရော လား…တိုင်းသိပြည်သိ ကုလားမျိုး တရုပ် မျိုး ဆကိ တွေ ရဲ့ နာမညိ တွေ ပြော မယ်။ ဗိုလ် ချုပ်တွေ လည်း ပါ မယ်။ မင်းသား မင်းသမီးတွေ လဲ ပါ မယ်။ ဒီနေ့သူတို့မျိုးဆက်တွေ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေ မို့ လို့ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ နိုင် ကဒ် လွယ် ကူနေ တာ လား။
အမေ့ဘက်ရော။ အဖေ့ဘက် မှာပါ ၊ဒီနေ့ခေတ်စားနေတဲ့ ကိုရီးယား ရုပ်လေးတွေ နဲ့ ဝမ်းကွဲ တွေ ။ တူ တူမတွေ ရှိ တယ်။ ဗမာ /ဗုဒ္ဓ တွေ ပေါ့ ဗျာ။ ဘာ သံသယ မှ မရှိ ။ နိုင် ကဒ် လျှောလျှော လျှူ လျှူ ပါ ဘဲ။ ကျူပ် က အစ္စလမ် ဆိုတော့ အောက် ဆက်ဖွား သမျှ သံသယ….ဒီ သံသယ…ဘယ် တော့ပျောက် မှာ လဲ…
ဒီနေ့ ခင်ဗျားတို့ ဘော်ဒါ ကြီး ဝန်ကြီးမင်း ကိုသောင်းလွင် ( ကျုပ် ထက် တောင် ကုလားရုပ် ပေါက် တယ် နော် ) နိုင်ကဒ် မှာ ဘာရေးထား လဲ သိ ချင် ပါ တယ် ။ သူ့သား သမီး တွေ ကော ?? ခင်ဗျား တို့ ဌာန ကြီး လူ လေး စား သွားအောင် နမူနာ အနေနဲ့ ကျော သား ရင် သား မ ခွဲ ခြားကြောင်း လဝက ဝန်ကြီး ရုံး web site မှာ သူတို့ နိုင် ကဒ် လေး တွေ တင် ပေး ပါ လား ဗျာ။ အော် ဖြစ် နိုင် ရင် ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအေဘယ်လ် ရဲ့ ထက်အောက် ဆွေစဉ် မျိုး ဆက် ဖိုင် လေး လဲ တင် ပေး ပါ ဗျာ။ ၁၉၄၈ မတိုင် ခင် မျိုးဆက် ၂ ဆက် နေ ထိုင် ခဲ့ တဲ့ သက်သေပြ ပုံ န မူ နာ လေး ကြည့် ရ အောင်ပါ။ သူ့ သားသမီး ။ မြေး တို့ ရဲ့ နိုင် ကဒ် ဓါတ် ပုံ လေး တွေ ရော ပေါ့ ဗျာ။
လက်ရှိ လွှတ်တော် က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကော်မတီ ( ဒေါ် အောင်ဆန်စုကြည် ။ ဦး သိန်းညွန့် တို့ ပါ တဲ့ ကော် မ တီ ပေါ့ ဗျာ ) ကို သူတို့ကြိုက် ရာ မြို့နယ် တစ်ခု ကို ရွေး စေပြီး ခင်ဗျား ဌာန က ရုံး တွေ ကို စစ်ဆေး မှု ခံ နိုင် ပါ သလါး..။ ခြ ကိုက် ။ ပျက်စီး ၊ ပျောက် ပျက် ဖိုင် တွေ ရှိ နေ ရင် ခင်ဗျား ရယ် ။ ဒုဝန်ကြီး ရယ် ။ ညွှန်ချုပ် ။ ညွှန် မှုးတွေ အလုပ် က ထွက် မယ် လို့ အာ မ ခံ ရဲ လါး ။ ဒါ ၁၉၉၀ ခု နှစ် နောက် ပိုင်း မှတ် တမ်း မှတ် ရာ တွေ ကို ညွှန်း တာ ပါ။ ၁၉၄၈ မတိုင် ခင် မျိုးဆက် ၂ ဆက် …၁၉၀၀ ခုနှစ် တော့ စိတ် ကူး မ ယဉ်ပါ် နဲ့ ဗျာ။
အရေး ကြီး တာလေး ပြော ဦး မယ်…အဖိုး အဖွား ၄ ဦး အ နက် တစ် ဦး က တိုင်းရင်း သား ဖြစ် ရင်…နိုင်ငံသား..ဖြစ် သည် ဆို တဲ့ ဥပဒေ ပါ ပြ ဌန်း ချက် ( နိုင် ငံတော် ကောင် စီ ရဲ့ ကြေငြာ ချက် ) လေး အ တိုင်း လုပ် လို့ ရ မ ရ ခင် ဗျား ရုံး အ ဆင့် ဆင့် ကို…မေး ပေး ပါ။ လူတွေ သိအောင်ကြေငြာပေး ပါ။ ဒါတောင် ကျုပ် တို့လို အသက် ၆၀ ကျော် တွေ ထဲ က ဒီ တိုင်းပြည် ပေါက် မွတ်စလင် အဖိုး အ ဖွား ၄ ဦး လုံး ဖြစ် နေ မဲ့ လူ တွေ ကျန် နေ နိုင် သေး တယ်။ ကိုယ် တိုင် ကျမ်းကျိန် ပြ တာက လွဲ လို့ ဘယ် လို လုပ် ရ မလဲ…ဖြေ ပေး ပါ ဦး.။
မိဘ က နိုင် ကဒ် ကိုင်ပြီး ရင်..သားသမီးတွေ နိုင်ကဒ် လုပ် ရင် လဝက ။က မ ရစ် အောင် ။ နိုင် ငံသားတွေ ကို ခင် ဗျား ဘယ် လို အကာအကွယ် ပြဌန်း ပေးမလဲ။
Posted: 30 Sep 2012 01:34 AM PDT
PENGERANG, 30 Sept — Kampung Sungai Rengit yang sunyi sepi sebelum ini bergegar apabila peserta demonstrasi melaungkan slogan dan tiupan "hon angin" mereka dengan berpakaian hijau untuk menentang projek petrokimia bernilai RM60 bilion itu yang bakal menyaksikan ribuan orang kampung kehilangan tempat tinggal dan kehidupan.
Hishammuddin turut dilihat menceriakan peserta protes dengan mengajar mereka menyanyikan lagu "Suara Rakyat" termasuk lagu "Oh my darling Clementine".
Namun begitu, ketua pengerang PKR Taufik Jahir mendakwa objektif mereka adalah untuk "mengusir penduduk kampung dari rumah mereka" kerana Kampung Sungai Rengit akan menjadi pulau yang dikelilingi Kompleks Bersepadu Petroleum Pengerang (PIPC).
"Sebaik sahaja kawasan ini menjadi pulau, nilai hartanah di Kampung Sungai Rengit akan jatuh dan penduduk akan terpaksa berpindah," kata Taufik kepada The Malaysian Inside. -TMI
Posted: 29 Sep 2012 09:06 PM PDT
"Saya sendiri membaca doa khas untuk tuanku dan usrah diraja semua agar sentiasa sejahtera serta dilindungi Allah.> Saya harap rakyat juga mendoakan kesejahteraan baginda.
Posted: 29 Sep 2012 08:26 PM PDT
Posted: 29 Sep 2012 07:25 PM PDT
"Sudah sampai waktunya Umno-BN berundur dan kita mengambil kuasa, kita akan lawan kezaliman," katanya di Rapat Pimpinan Nasional PKR 2012 yang diadakan di Shah Alam Convention Centre di sini.
"Untuk Selamatkan negara ini kita wajib menang, untuk menang kita kena kerja kuat dalam lawan tetap lawan," tegas Anwar.
As I write this, I'm laying in my mum's over-sized bed, with my Labrador sitting by my feet and the television on foralittle background noise.
This is not the way I had envisioned spendingaThursday afternoon. Normally, I would be chained to my desk in the city, buzzing to finish my stories for that afternoon's deadline. I would be making phone calls, writing emails and arguing with the sub-editors over grammar.
A lot is made of how 'busy, busy, busy' we all are, but I never really thought about my own level of action before I woke up withafever two weeks ago, and have been stuck in bed ever since.
I have Glandular Fever. I know it's notamedical tragedy and that I'm fortunate it's nothing worse. But when my doctor called to give me the results of my blood test, I burst into tears.
This simply wasn't good timing; I don't have time to be sick! I've got stuff to do! And at the risk of sounding likeacompetitive wowser, I'm really just too busy for this.
When I mentioned this to my mum, who has extraordinarily nursed me ever since I became sick, she looked at me like I had announced I was converting to Scientology and that, yes, Tom Cruse isn't at all insane.
"You're joking, right? You're too busy to be sick? Oh Lani, I've never heard anything so stupid."
My first instinct was to defend myself and my little outburst, but I've got to admit she hasapoint. I'm sick, but I'm getting the best care, and with any luck, I'll be back on my feet inacouple of weeks. But it's so strange to be immobilized like this, to be so swiftly taken down – it's like I'd forgotten I'm human, inarush to be and do everything.
Four weeks out of action – away from work, friends and society – seems likealife sentence. I can't help but think what I'll miss out on. I've always been afraid that if I ever stop, I'll somehow forever be trying to catch up again.
But being forced to stop – not slow down, but stop, completely – has me questioning how fast things are done now. Food is so fast an anti-movement, slow food, was created. Movies and television shows are downloaded in minutes and reviewed on Facebook within hours. News stories are broken instantaneously via Twitter, leaving less and less time to gather information, and instead fed the hungry beast that is the public and also the competition. It's so fast it makes me dizzy just thinking about it [and that's not just because extreme dizziness is one of my symptoms].
Every time I've been sick in the past, I've arrogantly decided I didn't want to be sick and I would rush back to work too soon, hang out with friends earlier than I should have. My health, I thought, could fit in with my life, and on my terms. Glandular Fever has been, as they say, my poetic justice. It's forced me to realise there's something even more powerful thanacalendar filled up with social engagements and deadlines.
In the meantime, while I wait for the night sweats to go away and the overwhelming fatigue to fade, I've decided to not try and rush anything. I'm going to stay in bed and rest, drink as much water as possible and not exert myself by even watching too much television or read too much. It's not something that comes natural, but I'm going to give itago. As my mum would say, "there's nothing more important than your health". And at the risk of giving herabig head, I'm afraid she's right. Again.